Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Omicron dị ugbu a na United States: CDC kwadoro
Akụkọ Ahụike • News • Akwụkwọ akụkọ USA
Ngalaba Ahụike Ọha na California na San Francisco ekwenyela na ikpe COVID-19 na nso nso a n'etiti mmadụ na California bụ nke Omicron variant kpatara (B.1.1.529). Onye ahụ bụ onye njem si South Africa lọta na Nọvemba 22, 2021. Onye ahụ gbara ọgwụ mgbochi zuru oke ma nwee mgbaàmà dị nro na-akawanye mma, na-anọrọ onwe ya ma na-anwale ya nke ọma. Akpọtụrụla ndị nọ nso niile wee nwalee ihe adịghị mma.
Emere usoro nke genomic na Mahadum California, San Francisco na akwadoro usoro a na CDC ka ọ dabara na ụdị Omicron. Nke a ga-abụ ikpe izizi enwetara na COVID-19 sitere na ụdị Omicron achọpụtara na United States.
Na Nọvemba 26, 2021, World Health Organisation (WHO) weputara ụdị ọhụrụ, B.1.1.529, dị ka Variant of Concern wee kpọọ ya Omicron na Nọvemba 30, 2021, United States nyekwara ya dị ka Variant nke Nchegbu. CDC anọwo na-enyocha ma na-akwado maka ụdị a, anyị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma na US ndị ọzọ na ahụike ọha na eze zuru ụwa ọnụ na ndị mmekọ ụlọ ọrụ iji mụtakwuo. N'agbanyeghị achọpụtara Omicron, Delta ka bụ nsogbu kachasị na United States.
Mpụta na nso nso a nke Omicron variant (B.1.1.529) na-emesi ike mkpa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ihe nkwalite, na atụmatụ mgbochi izugbe achọrọ iji chebe megide COVID-19. Onye ọ bụla dị afọ 5 gbagoro ga-enweta nkwado ọgwụ mgbochi a na-atụ aro maka onye ọ bụla dị afọ 18 gbagoro.